Yini okufanele uyenze uma ingane ihlushwa i-bruxism | Bezzia
Okufanele ukwenze uma ingane ihlushwa i-bruxism
UMaria Jose Roldan | 25/09/2021 11:06 | Kubuyekezwe ku- 25/09/2021 11:09 | UMadres
Uma uqaphele ukuthi ingane yakho igaya amazinyo ayo lapho ilele, kungenzeka ukuthi uhlushwa yisifo esibizwa nge-bruxism. Kuyisifo esivame kakhulu kunalokho ongakucabanga, sithinta ikota yomphakathi. Ekuqaleni asikho isidingo sokukhathazeka, ngoba i-bruxism ivame ukunyamalala lapho ingane iphuma namazinyo waphakade.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela kabanzi nge-bruxism kanye kungaba namiphi imiphumela maqondana nempilo yomlomo yengane.
1 Kuyini i-bruxism
2 Izizathu ezivamile ze-bruxism
3 Ungayiphatha kanjani i-bruxism
I-Bruxism yisifo esithinta imisipha yomlomo futhi lapho kukhona khona ukusikwa okweqile, kubangela umsindo omkhulu wokugaya. I-Bruxism ingadala ubuhlungu ekhanda, emhlathini, noma endlebeni. Kunezinhlobo ezimbili noma izinhlobo ze-bruxism:
Yaziwa njenge-centric, equkethe ukuqinisa amazinyo kanzima kunokujwayelekile. Kungenzeka kokubili emini nasebusuku.
I-eccentric ibangela ukugaya kwamazinyo futhi kuvame ukuvela ebusuku.
Kumele kuqashelwe ukuthi i-bruxism ivamile futhi ijwayelekile ngenkathi amazinyo akha. Njengomthetho ojwayelekile, Lesi sifo sivame ukunyamalala ngemuva kokudonswa unomphela kwengane.
Izizathu ezivamile ze-bruxism
I-Bruxism ingabangelwa yizimbangela zomzimba noma ezingokwengqondo.
Uma kwenzeka ukuthi kungenxa yezizathu ezingokwengqondo, kuvela i-bruxism ngenxa yengcindezi eyeqile empilweni yengane noma ngenxa yesimo esibalulekile sokukhathazeka.
Izimbangela zingabuye zibe ngokomzimba, njengokuvela kwamazinyo amasha noma isikhundla sawo esibi. Konke lokhu kusho ukuthi bayakwazi ukugaya amazinyo ngenkathi ingane ilele.
Ungayiphatha kanjani i-bruxism
Njengoba sesivele siphawule ngenhla, ezimeni eziningi kakhulu, i-bruxism ivame ukuzihambela yodwa. Ukwelashwa kusebenza kuphela uma kwenzeka kunganyamalali futhi kubangele ukugqoka kanzima emazinyweni noma kubuhlungu obukhulu kuwo.
Uma ingane isencane kakhulu, mane ubeke ipuleti lepulasitiki endaweni engenhla futhi ngaleyo ndlela uvimbele amazinyo ekuhluphekeni kanzima. Uma eminyakeni edlule, i-bruxism ayinyamalali, kungadingeka ukuqala ukwelashwa kwe-orthodontic noma kwamathambo.
Uma kuvela ukuthi i-bruxism ibangelwa izimbangela ezingokwengqondo, kungakuhle ukuthi usebenzise izindlela ezehlukene zokuphumula enganeni ukunciphisa amazinga okucindezeleka noma okukhathazeka ngangokunokwenzeka. Endabeni yezizathu zomzimba, kunconywa ukuthi uqale ukwelashwa okususelwa ku-physiotherapy esiza ukukhulula imisipha yomlomo.
Ngamafuphi, ungakhathazeki ngokweqile uma ingane yakho igaya amazinyo ayo lapho ilele. Abazali kufanele banake ukuthi ukugula okunje kuguquka kanjani uma kwenzeka izinto ziba zimbi kakhulu. Ukunciphisa le bruxism, kungakuhle ukuthi ulandele uchungechunge lwemikhuba yokuphumula esiza ingane ukuthi ifike ngokuthula ngesikhathi sokulala.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Okufanele ukwenze uma ingane ihlushwa i-bruxism
Uyazazi izifo ezivame kakhulu zethambo?
Amathiphu wokunciphisa i-carbon footprint yakho